HomeAfricaSulley Muntari Oo Fuqarada Reer Brazil Lacag U Qaybiyey ( Video )
Xidiga xulka qaranka Ghana Sulley Muntari ayaa lacag sadaqo ah u qaybiyey xaafadaha dadka masaakiinta ahi degen yihiin ee wadanka Brazil.
Sida ay qortay majalada 101 Great Goals, Muntari ayaa dhex qaaday xaafada fuqaradu ku nooshahay ee magaalada Maceio, oo ah magaalada ay xulka Ghana ciyaaraha koobka aduunku ku ciyaarayaan:
Laacibka khadka dhexe ee naadiga AC Milan ayaa la sheegay inuu ka codsaday tababare kuxigeenka xulka in la siiyo horumarin mushahar, si uu sadaqo ahaan ugu qaybiyo dadka masaakiinta ah ee magaalada ku nool.
Intii uu ku jiray safarkiisi sadaqo bixinta , xidigan reer Afrika waxa uu sawiro la gallay dadka deegaanka, waxaanu caruur badan siiyey saxeexiisa, intaa kadibna wuxuu gacanta galliyey jeebkiisa si uu uga soo saaro lacag uu ku taxay dadka fuqarada ah ee xaafadaha.
Laakiin ugu dambeyntii ciidanka Police ka ayaa is hor taagay talaabadaas, kuna amray Muntari inuu joojiyo lacagta uu qaybinayo, sida ay ku warantay wakaalada . Per Globo.com (h/t Yahoo! Sports), oday waayeelah oo magaciisa la yidhaahdo Edivaldo, kana mid ah dadkii lacagta la siiyey ayaa isagoo ka xanaaqsan talaabada Police ku ku hor istaageen sadaqa, ayaa yidhi sidan:
“Waxaan ku noolaa xaafadan dadka faqiirka ahi ku nool yihiin , oo ka dambeysa garoonka Rei Pele Stadium, mudo afartan sanno ah, waligayna maan arag qof sidan oo kale ah. mid qudh ah oo ciyaaryahanada ka mid ahi xataa hal marna nama soo booqan. Brazil waligay waxba ima siinin, laakiin Ghana wey isiisay, Waan taageeri doonaa ilaa dhamaadka ciyaaraha .
“Hooyaday oo 80 jir ah iyo anigu waxaanu helnay R$350 [Riyaalka Brazil ah],” ayuu yidhi Inês Corrêa, oo doonayay isna inaan la hor istaagin sadaqada Muntari, markii Police ku meesha soo galleenee isku xeereen Muntari. “Waxaan rumaysanahay inuu gacanta ku hayay R$5,000 laakiin nasiib daro ciidanka Police ka ayaa soo gebo gabeeyey shaqadii wanaagsanayd. Xaafadan, waxaanu aragnaa oo kaliya siyaasiyiinta marka ay doorashada gaadho.”
Xulka Muntari ee Ghana ayaa barbar dhac 2-2 ah la gallay Germany taas oo cadaysay inay haystaan fursadii ay ugudbi lahaayeen wareega 16 ka ee Group C oo ay kulanka ugu dambeeya la leeyihiin Portugal.
Fadeexadii Ugu Balaadh-nayd Oo Gil-gishay Kubbada Cagta Aljeeriya
Scolari: Maalintii ugu Qadhaadhayd Noloshayda
Angel Di Maria Oo SI Rasmi Ah Ugu Biiray PSG